“Juventus waxay ku aaday mid ka mid ah kooxaha ugu adag tartanka Champions League” – Pavel Nedved – Gool FM
“Juventus waxay ku aaday mid ka mid ah kooxaha ugu adag tartanka Champions League” – Pavel Nedved
(Europe) 17 Dis 2018. Waxaa la sameeyay isku aadka tartanka Champions League wareegiisa 16-ka oo ay saddexdii xili ciyaareed lasoo dhaafay soo difaacatay kooxda Real Madrid.
Isku aadka dhawaan la sameeyay ayaa waxaa kasoo baxay kulamo aad u adag sida kulanka kooxaha Juventus iyo Atletico Madrid, kaasoo kulanka lugta hore lagu ciyaari doono garoonka Madrid ku yaala ee Wanda Mediterraneo.
Hadaba madaxweyne ku xigeynka kooxda Juventus Pavel Nedvěd ayaa ka hadlay kulankan xiisaha badan, kadib wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Italia” wuxuuna yiri:
“Isku aadka la sameeyay Juventus waxay ku beegantay kooxd ugu adag kooxaha kaalinta 2-aad ku soo baxay aragtidayda, Atletico Madrid waa koox difaaceeda uu adag yahay ee aad u wanaagsan”.
“Wuxuu noqon doonaa kulan qaas u ah, hogaamiyaha tartanka Champions League ee Cristiano Ronaldo”.
“Atletico Madrid waa koox xoogan, laakiin sidoo kale waxaan heysanaa koox adag, waxaana diyaar u nahay kulankan, kuma fekeri karno xiligan fianka tartankan, ugu horeyn waa inaan diirada saarnaa sida aan kaga gudbi lahayn wareega 16-ka”.
“Atletico Madrid waxay heysataa difaac aad u xoog badan, iyo weerar cajiib ah uu hogaaminayo Antoine Griezmann, kaasoo dhawaan ku guuleystay Koobka Adduunka, sidaas darteed waa inaan ka taxadirnaa shaxda kooxda reer Spain”.